Myanmar Property Listings, Myanmar Real Estate Website,Yangon Real Estate
Myanmar Property Portal
Land	Lakh 300
Garden Land For Sale in Hmawbi
Land	Lakh 20 000
ဥယှာဉ်ခြံမြေ ၊ ပုံစံ ၇ ကျပီး
Land	Lakh3500
အင်းစိန်မြို.နယ် ဖော့ကန် ရပ်ကွက်
Apartment	Lakh 1 350
မြေကွက်အကျယ်အ၀န်းမှာ ၂၄'-၆" x ၅၀'-o" (sqft 1080) ဖြစ်ပါသည်။ (၈ထပ်ခွဲအဆောက်အဦ) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- 09-456408888 ..
Condo	$ 1 500 /Per month
Located in Insein Rd, Hlaing Tsp , Yangon.
Condo	$2500 /Per month
GEMS Condo with Inya Lake View
Spacious luxury Condo For Rent in Yangon.
Condo	Lakh 1 850
လမ်းမတော်မြို့ နယ် ကိုင်းတန်းလမ်း
Apartment	Lakh2500
စမ်းချောင်း | တိုက်ခန်း
စမ်းချောင်းမြို.နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ 1600 sq-ft ၊ သိန်း ၂၅၀ဝ ( ညှိနှိုင်း)
၀င်ငွေရလမ်းမပြနိုင်သည့် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ၀င်ငွေအပေါ် ၀င်ငွေခွန် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ အထိ ကောက်ခံမှုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး အခွန်မဆောင်ခဲ့သော ၀င်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခွန်သုံးရာခိုင်နှုန်းနှင့် ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ထမ်းဆောင်ရန် ပြင်ဆင်လှေ
ပစ္စည်းခွန် ပုံစံသစ်ဂယက်ကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေး ထပ်ကျနိုင်ခြေရှိ
မြို.နယ်အလိုက်အိမ်ခြံမြေ စံနှုန်းများ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ( ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ )
မြေပိုင်ရှင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကို ငှားနေသူတွေက အိမ်ငှားကလွဲပြီး ရေဖိုးနဲ့တခြားကုန်ကျစရိတ်တွေထပ်ပေးစရာ မလိုအပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်
မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ
အဆောက်အအုံအသစ်(အရပ်စာချုပ်) ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
Properties in Yangon Township